Dilaaga Dhibbanayaasha wuxuu u beddelay Burgers - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Dilaaga Dhibbanayaasha wuxuu u beddelay Burgers
Warar Naxdin LehDembi run ah
Dilaaga Dhibbanayaasha wuxuu u beddelay Burgers
Dilaaga aargudashada ah Joe Metheny wuxuu bilaabay xanaaqiisa xiisaha badan markii xaaskiisa ay qaadatay canugooda oo ay ka carartay gurigeeda oo ku yaal Baltimore, Maryland. Tani waxay ahayd dhimbiilo bilawday dhammaantood.
Markii Metheny la qabtay 2016 wuxuu qirtay dambiyadiisa, wuxuuna ku eedeeyay dhammaan baahidiisa ba'an ee aargudashada xaaskiisa iyo ninka ay isaga u tagtay. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd xanaaqan abuuray oo quudiyay wax ka sii hooseeya isaga.
In kasta oo cadhadu sii hurisay himiladiisa, Metheny waxay la kulantay dhibbanayaal badan oo hadda uun is arkay iyagoo ka gudbaya jidkiisa nolosha. Meel looga baxo gardarradiisa iyo ciilkiisa oo dhowaan laga tegey, ninki mar ku farxay ayaa u baahday marin looga baxo xanaaqiisa; marinkaasiina wuxuu ahaa dil, kufsi, iyo googoyn.
Raggaas iyo dumarkani badankood ee ku dhacay inay meel xun ku helaan waqti khaldan waxay ahaayeen kuwa wareegaaya, hoylaawe ah, iyo dhillooyin. Dad aan cidina ogaan karin inay maqan yihiin ama la la'yahay.
Tani waxay u muuqan kartaa mid la mid ah sheekooyinkii aad horey u maqashay, laakiin waxa ka soocaya Metheny iyo dilaagaaga "caadiga ah" waa sida uu u daadiyay meydadka dhibbanayaashiisa aan laga fiirsan.
Metheny wuxuu kala jarjaray jirkooda, wuxuu urursaday hilibkooda iyo hilibkooda, wuxuuna ku dhex daray hilibka doofaarka iyo hilibka lo'da uu ka sameyn jiray hamburgers. Kadib wuxuu ku iibin lahaa hamburgers-ka dhinaciisa wadada dhinaceeda.
Gacan ku dhiiglaha ayaa sheegay in meydadka ay leeyihiin dhadhan la mid ah hilibka doofaarka dhulka. Wuxuu yiri "hadaad isku qasanto (hilibka dhulka) qofna ma sheegi karo farqiga." Xaqiiqdii, weligiis ma lahan hal macaamil, iyo macaamil dambiyadiisa, weligiis kama cawdeen dhadhanka cuntadooda.
Qeybaha meydadka ee aan ku habooneyn caawiyaha hamburger, Metheny waxay ku aaseen gaari xamuul ah.
Waxay u muuqatay in dambiyadiisu ayan ahayn aargoosi ku saleysan. Taa baddalkeeda, markii qaboojiyaha Metheny uu yaraado wuu bixi jiray oo wuxuu raadsan jiray naf kale oo masaakiin ah maaddadaas gaarka ah ee uu ku leeyahay hamburgers uu ugu adeegi jiray macaamiishiisa. Wuxuu u muuqday mid dhadhan dhab ah u leh dilka.
Markii la qabtay wuxuu sheegtey inuu diley 10 qof. Wuxuu u sheegay mas'uuliyiinta "Waxa kaliya ee aan xumaan kaga dareemayo arimahan midkoodna waa inaan dilo labada hooyo ee qaswadayaasha ah oo aan runtii jeclaa, waana haweeneydii hore ole iyo bastardka ay kuxirantahay."
Metheny wuxuu ku qaatay mudo ka yar toban sano oo xabsi ah ka dib markii lagu xukumay laba xabsi daa'in iyada oo aan la siidaynin dilkii Kathy Spicer iyo Cathy Ann Magaziner.
Sannadkii 2017-kii ayaa meydkiisa laga helay qolkiisa oo uu ka helay askari ka tirsan ilaalada xabsiga. Wuxuu ahaa 62 jir.
dad cunidMethenyxanaaqa diladilaaga
Jacaylka loo qabo wax kasta oo argagax leh iyo dambi dhab ah, Piper had iyo jeer wax buu ka qorayaa. Kudar jilitaan qurxinta, moodada, iyo qaab nololeedka beddelka ah adiguna qoraagan ayaa ku dheggan. Waxaad ka heli kartaa maqaaladeeda cinwaanka iHorror.com ee ku saabsan cabsida iyo qaybta cusub ee dambiyada runta ah ee loo doortay inay hoggaamiso,.
Dib u eegista TADFF: 'Murugada' waxay dhistaa sheeko xariirooyin cusub oo cabsi badan
'Wiilasha Khasaaray': Kiefer Sutherland Faahfaahin Faahfaahin dil ah oo la tirtiray